Zivakalisa inkxalabo iinkokheli zokuhlala eSamora | News24
Zivakalisa inkxalabo iinkokheli zokuhlala eSamora
Zivakalise inkxalabo iinkokheli zeqoqo lokhuseleko lwasekuhlaleni, iCommunity Policing Forum ngabula makhumsha, eSamora Machel kulandela iziganeko zokunqolonywa kwabantu kutshanje.
Esi simbonono siza emva kokuba oonqalintloko bethe bavulela ngezulu lezandla kwiqela labantu ebelihleli kwiholo yoluntu iTsoga, ngakwisikhululo samapolisa aseSamora, ngoMvulo.
Kubikwa ukuba babini abantu abathe bawunabela uqaqa kwesi siganeko
Esi sihelegu sichazwe njengenxalenye yeziganeko ezikumila kunje ezithe zehla kule ngingqi kwisithuba seeveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Kungoku nje iinkokheli zokuhlala zifuna amapolisa onyuse iikawusi, kwaye enze umsebenzi wawo ngendlela.
Isithethi seCPF uBongani Maqungwana uthe bengabahlali baphila ubomi bentshontsho. Usichaze esi sehlo njengesishiye abahlali bothukile.
“Aba bantu baphume nje kwiQuatum ebimise endleleni iOliver Tambo Drive bangena eyadini eTsoga basuka badubula bengakhange bathethe namntu,” utshilo Maqungwana.
Wongeze ngelithi akuqali ukwenzeka into enje kule ngingqi. “Kwiiveki ezintathu ezidlulileyo kwadutyulwa umqhubi we-taxi ezihlelele ngaphakathi esithuthuni sakhe kwindlela iLillian Ngoyi. Kohlika nje abantu kwi Avanza bamdubula. Kwiveki elandela leyo kwadutyulwa omnye uno-taxi xa wayesohlika emotweni yakhe eyovula isango ukulungiselela ufaka imoto,” uthethe watsho.
U-Maqungwana usola ukubambalwa kwamapolisa asebenza kwisitishi samapolisa eSamora nje ngonobangela.
“Nje ngokuba esi sitishi salapha eSamora sisitsha nje amapolisa ambalwa kwaye akakwazi ukubonakala kuyo yonke indawo kungangcono ukuba angongezwa,” ucacise watsho.
Isithethi samapolisa kwiphondo uFC Van Wyk usingqinile esi sehlo wathi kuvulwe amatyala amabini okubulala. “Ngokuhlwa kwangoMvulo kudutyulwe amadoda amabini aneminyaka enga-36 asweleka eOliver Tambo Drive eSamora Machel ngabantu abangaziwayo. Akukabikho mntu ubanjiweyo,”utshilo u-Van Wyk.